Meelaha ugu wanaagsan ee lagu booqdo Jammu iyo Kashmir
Cirifka waqooyi ee Hindiya waxaa ku yaal magaalooyinka xasilloon ee Jammu, Kashmir iyo Ladakh.
Waxaa ku hareereysan qaar ka mid ah buuraha ugu dhaadheer ee barafku ku badan yahay ee Himalayan iyo Pir Panjal Range, gobolkan ayaa hoy u ah qaar ka mid ah meelaha ugu quruxda badan iyo meelaha xiisaha leh ee Aasiya oo dhan taasoo keentay in si caan ah loo caleemo saaro Switzerland ee Hindiya. Laga soo bilaabo harooyinka quruxda badan ilaa muuqaalka quruxda badan ee Vale of Kashmir si aan dadaal lahayn ayaa loogu qaldami karaa jannada dhulka.
Waxaad ubaahantahay Fiisaha e-Dalxiiska ee Hindiya (eVisa India or Hindida Visa Online) si ay u marag kacaan meelaha cajiibka ah iyo khibradaha dalxiiska ajnabiga ah ee Hindiya. Haddii kale, waxaad ku booqan kartaa Hindiya a Fiisaha e-Ganacsiga ee Hindiya oo waxay rabaan inay xoogaa madadaalo iyo muuqaal ah ku sameeyaan waqooyiga Hindiya iyo buuraha Himalayas. The Hay'adda Socdaalka Hindiya waxay ku dhiirigalinaysaa booqdayaasha Hindiya inay dalbadaan Fiisaha Hindida ee Hindida ah (Hindiya e-Visa) halkii aad ka booqan lahayd Qunsuliyadda Hindiya ama Safaaradda Hindiya.
Caasimadda xagaaga ee Kashmir, magaalada Srinagar waxay leedahay taariikh hore oo aad u kala duwan. Caanka ah ee loo yaqaan Dhulka Harooyinka iyo Beeraha, Srinagar waxaa aasaasay Boqortooyada Mughal ee 14th Century. Bartamaha magaalada waxaa fadhiya harada Dal oo sidoo kale loo yaqaano inay tahay Jewel on Crown of Kashmir waayo muuqaalkeeda quruxda badan iyo biyaha soo jiidashada leh ee ay ku jiraan buuraha barafka leh.
Dusha sare ee harada Dal waxaa ku nastaa doomaha guriga kuwaas oo sidoo kale labanlaabaya sida hudheelada yaryar ee dalxiisayaasha si ay u sabeeyaan oo ay u joogaan. Guryaha sabeynaya waxaa lagu sameeyay tignoolajiyada casriga ah si loo hubiyo raaxada iyo badbaadada rakaabka, waxayna bixiyaan habka ugu wanaagsan ee ay ku qaadan karaan dhowr maalmood dhabta dabiiciga ah. Harada Dal waxaa sidoo kale loo yaqaanaa beero sabeynaya kuwaas oo beera midhaha, ubaxa iyo khudaarta korkeedana laga baadhi karo Shikaras, doomaha dhaqameed ee ragga iyo dumarka Kashmiri ay qarniyo badan isticmaali jireen si ay ugu shiraacdaan harada.
Markaad booqanayso Srinagar, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad qaadato dhowr saacadood si aad u booqato Beerta Shalimar Bagh Mughal oo ku taal meel 14 kiiloomitir u jirta harada Dal. Beerta caanka ah waxaa u wakiishay boqoradiisii ​​1616-kii boqorkii weynaa ee Mughal Jahangir, waana meel ku habboon daawashada shimbiraha iyo in la helo firaaqo deggan oo ku ag yaal kanaalka u shaqeeya sida xudunta beerta.
Tixraac U-qalmitaanka Visa-ga Hindiya.
Saldhigga buurta Gulmarg ama sida aad loo yaqaan cawska ubaxa waxay isu keentaa muuqaal cajiib ah oo leh tacaburyo xiiso leh. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee lagu sameeyo Kashmir waa in la fuulo Gulmarg gondola kaas oo ku jira labaad ee ugu dheer iyo sidoo kale gaadhiga labaad ee ugu sareeya aduunka oo dhan.
Fiilada uu baabuurka dhex maro xadka quruxda badan ee Himalayan, waxa uu ka bilaabmaa Gulmarg Ski Resort oo ah meel aad caan ugu ah ciyaaraha barafka. Waxa kale oo ku dhex qarsoon silsiladaha buuraha Gulmarg Alpather Lake, mid ka mid ah harooyinka sare ee Hindiya oo ku taal 14,402 ft. oo ka sarreysa heerka badda. Harada waxa kaliya oo lagu geli karaa masaafo 12 km ah iyada oo loo marayo seeraha caleenta ah ee cawska ah iyo jidadka barafka leh haddii aad booqato harada bilaha u dhexeeya Noofambar iyo Juunyo inta lagu jiro mudadaas oo ay haradu wali baraf tahay.
Mussoorie Hill-saldhig ku yaal meelaha dhaadheer ee Himalayas iyo kuwa kale
Waxay ku taallaa gudaha degmada Jammu, Sancaar waa dhagax qarsoon oo dooxa ah. Waxay ku taal meel ka mid ah cawska buuraha sare ee Himalayas, saldhigga buurta waxaa loogu magac daray labada haro, Sana iyo Sar waxayna gabbad u tahay xamaasadda tacabka badan.
Waxay bixisa daba-gal ku dul-socota geedaha geedaha ah iyo cawska ubaxa ah iyo harooyinka gobolka, oo ka dulman Buuraha Himalaya iyo dariiqyo socod oo bixiya aragtiyo yaab leh oo dooxada oo dhan ah. Si kastaba ha ahaatee, qaybta ugu fiican ee ku saabsan Sanasar ayaa weli ah degenaanshaheeda iyo nabadgelyadeeda sababtoo ah maahan daadadka dalxiisayaasha.
Tixraac Ganacsiga Indiya Visa.
Waxay ku taal meel aan ka fogayn dhul weynaha Kashmir waa buurta caanka ah ee Pahalgam taasoo hoy u ah aan la tirin karin. harooyinka glacial, webi haybad iyo muuqaal deggan. Mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo tago gudaha Pahalgam waa Overa Aru Sanctuary Duurjoogta oo ku yaal daanta sare ee wabiga Lidder ee qulqulaya. Gudahan biosphere-ka ah ee la ilaaliyo waxay ku nool yihiin qaar ka mid ah noocyada dhif iyo naadirka ah ee Hindiya sida cawska Kashmir, shabeelka barafka, orso brown, shimbirta monal ee Himalayan iyo deerada musk. Socdaal ku tag meesha quduuska ah ee duurjoogta si aad u ogaato qaar badan oo ka mid ah noocyada dhifka ah ee deegaankooda dabiiciga ah.
Kadib markaad booqato xayawaanadan quruxda badan, waxaad booqan kartaa labada haro ee quruxda badan ee Himalayas oo aan ka fogeyn goobta duurjoogta ah. Marka hore, harada Sheshnag oo ku fadhida korka sare ee 11,770 ft. ee ka sarraysa heerka badda oo ah meesha ugu neefsan ee buuraha barafka. In ka yar 15 km Harada Sheshnag waa haro kale oo sare oo sare oo la yiraahdo harada Tulian meel sare oo ah 12,000 ft. Safarka haradan waxaa lagu qaadi karaa korka pony kaas oo kaa jiidaya muuqaal qurux badan ama socod 48-km ah oo ku habboon kuwa doonaya khibradda ugu fiican ee goobtan jannada ah.
Ugu dambeyntii ma aha madadaalo ugu yar waa Beerta Madadaalada ee Lidder oo ku taal bangiyada sare ee Wabiga Lidder, marka laga reebo muuqaalka quruxda badan ee la socda goobta, beerta madadaalada waxay bixisaa soo jiidasho badan oo ka bilaabma waddo tareen yar ilaa baabuur adag oo ay la socdaan. tiro badan oo kanival ah oo loogu talagalay carruurta iyo sidoo kale dadka waaweyn. Daqiiqad kasta oo lagu qaato Pahalgam adiga iyo gacaliyahaagu weligiiba aad baad u qadarin doontaan.
Dalxiisayaasha ajaanibta ah ee ku imanaya Hindiya fiisada elektaroonigga ah waa inay yimaadaan mid ka mid ah garoomada loogu talagalay. Labadaba Delhi iyo Chandigarh waa garoon diyaaradeed oo loogu talagalay e-Visa-ha Hindiya oo u dhow Himalayas.
Jannada dhammaan kuwa jecel dabeecadda, magaalada Sonamarg waa mid ka mid ah meelaha ugu nabdoon uguna yaabka badan Kashmir dhexdeeda. Waxay ku taallaa oo aan 80 km u jirta Srinagar, Qarniyadii dhexe Sonamarg waxay u dhaqantay sidii albaabka laga soo galo marinka xariirta caanka ah ee adduunka ee isku xira Kashmir iyo Shiinaha.. Hadda saldhiga buurtu waxa ay hoy u tahay harooyin badan oo alpine ah iyo wabiga quruxda badan ee Sindh kaas oo mara cawskiisa iyo dooxooyinka.
Ciyaartoyga junkie ee kuligeena gudaheena ah, Sonamarg waxay siisaa rafaadka biyaha cad ee u dhexeeya mowjadaha qaska badan ee waayo-aragnimada raafka ilaa qulqulka xiisaha leh ee dalxiisayaasha cusub. Intaa waxaa dheer, waxaad markhaati u noqon kartaa glacier sharaftiisa oo dhan adigoo u socdaalaya Glacier Thahiwas oo ah meel caan ah oo lagu ciyaaro skiing iyo sidoo kale barafka.
Jawhar dhabta ah ee Kashmir, Barafka waxa ku hareeraysan biyo-dhacyo dhawr ah iyo harooyin barafoobay oo dhallatay awgeed barafkii ka dhalaalay barafka. Waxaa si fudud loogu heli karaa masaafo 3 KM u jirta dhul weynaha Sonamarg ama si ka xiiso badan waxaa lagu heli karaa faras aad u sareysa oo kugu ridi doonta midigta sare. Waqtiga ugu wanaagsan ee la booqan karo Sonamarg waxay ahaan doontaa xilliga jiilaalka oo magaalada oo dhan uu baraf da'ay.
Muwaadiniinta dalal badan oo ay ka mid yihiin United States, France, Denmark, Germany, Spain, Italy xaq u leedahay Hindiya e-Visa(Hindida Visa Online). Waxaad codsan kartaa Codsiga internetka ee elektarooniga ah ee fiisaha elektarooniga ah halkan.
Codsiga Visa Hindiya